के तपाइको नङ् टोक्ने बानी छ ? छ भने आजै छाड्नुहोस् त्यो बानि निम्त्याउन सक्छ यस्ता खतरनाक रोग - ramechhapkhabar.com
के तपाइको नङ् टोक्ने बानी छ ? छ भने आजै छाड्नुहोस् त्यो बानि निम्त्याउन सक्छ यस्ता खतरनाक रोग
केहि मानिसहरुको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । धेरैजसो बालबालिकामा यस्तो बानी देखिनु सामान्य हो । तर, युवायुवती अथवा पाका उमेरका मानिस नै नङ टोकीरहेका हुन्छन् । नङ टो’क्ने बानी खराब हो । त्यसैले अभिभावकहरुले बालबालिकालाई नङ टोक्नु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ ।
नङ टो’क्ने बानीले विभिन्न प्रकारका सं’क्र’म’ण फैलिने डर हुन्छ । शरीरका विभिन्न अंगजस्तै नङ पनि फोहर र सं’क्र’म’ण बोक्ने प्रमुख अंग हो । नङ टो’क्दा निम्त्याउँन सक्ने समस्याहरु :
रक्तस्राबः नङ टोक्दा नङ नजिकैको छाला बारम्बार उक्किरहन्छ। जसले गर्दा रक्तस्राब हुनुका साथै अत्यन्त दुखाइ पनि हुन्छ ।
आन्द्रामा जुकाःनङ टो’क्दा नङमा भएको फोहर मुख हुँदै आन्द्रामा जाने भएकाले यसको पहिलो असर आन्द्रामा पर्छ ।नङमा भएको फोहोरको माध्यमबाट पेटमा जुका पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
सासको गन्धः धेरै नङ टोक्ने मानिसको मुखमा ब्याक्टेरिया जम्मा हुने भएकाले सास गन्हाउने समस्या देखिन्छ । बिहान बेलुकै दाँत ब्रस गरे पनि नङ टो’क्ने बानी भएका मानिसको सास गन्हाउने कारण भनेकै ब्याक्टेरियाले गर्दा हो ।मुखमा फोकायदि औँलामा मुसा छ भने, त्यो मुखभित्र या ओठमा सजिलै फैलिन सक्छ । मुखमा फोकाहरु आउन सक्छन् । मुसाको माध्यमबाट हुयमन प्यापिलोमा भाइरस सर्न सक्ने पनि चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यो भाइरस पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कारक हो ।
शरीरमा केमिकलः यदि नङ पोलिस लगाउने महिलाको नङ टो’क्ने बानी छ भने, पोलिसमा भएका विभिन्न केमिकल शरीरभित्र प्रवेश गर्ने ख’त’रा रहन्छ । अनावश्यक केमिकलका कारण विभिन्न समस्या आउन सक्छन् ।
नङ बांगिनेः बारम्बार नङ टोक्ने मानिसको नङको स्वरुप फेरिन सक्छ । नङ बांगिने हुन सक्छ । नङ टो’क्ने मानिसको नङ बांगिने समस्या टो’क्न छोडेपछि हट्ने भए पनि केहीको नङ सधैँका लागि खराब हुन सक्छ ।
छालाको सक्रमणः नङ टो’क्ने मानिसलाई पारोनाइसिया नामक छालाको सं’क्र’म’ण हुन्छ । यो सं’क्र’म’णले नङ वरपरको छालालाई असर गर्छ । नङ रातो हुने र नङ वरपरको मासु सुन्निने ख’त’रा हुन्छ ।
ब्याक्टेरियाको संक्रमणः सन् २००७ को एक अध्ययन अनुसार नङ टोक्ने मानिसको मुखमा नटो’क्ने मानिसको मुखमाभन्दा धेरै ब्याक्टेरिया हुन्छ । यस्तै हैँजा–पखालाजस्ता सं’क्र’म’ण फैल्याउने इकोलाइ भाइसर नङबाट सर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।